ကျမ နေ့တိုင်းဖတ်ဖို့….Love, - MyanmarMagazine
(1)မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ … ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ် ကိုယ်ရပ်နိုင်ရမယ်။
ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်နဲ့ ကိုယ့်ဘဝကို ပဲ့ကိုင်နိုင်ရမယ်။
ယောကျာ်း ယူသည်ဖြစ်စေ .. မယူသည်ဖြစ်စေ … ဘဝမှာ ယောကျာ်းဆိုတာ ကိုယ့်အတွက် မရှိမဖြစ် ဆိုတဲ့ စိတ်ဓါတ်မျိုးကို ဖျောက်ဖျက်ပစ်နိုင်ရမယ်။
ယောကျာ်းတစ်ယောက် ပေးသွားတဲ့ သင်ခန်းစာကို ဘဝရဲ့ တိုးတက်မှုအတွက် ပြောင်းလဲပစ်ရမယ်။
တမြေ့မြေ့ခံစားပြီး ကြေကွဲတမ်းတ မနေရဘူး။
#credit to သမီးဆိုး
1။ သူပြုံးမှကိုယ်ပြုံးမဲ့အစား ကိုယ်ကစပြီးပြုံးပြလိုက်ပါနော်
2။ ကံတရားပါ ကွာလို့ ပြောနေသ၍ ဥာဏ်သမားဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး
3။ စေတနာ သည် ကံတရား၏ အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။
4။ လူတိုင်းအမှားနဲ့ မကင်းပေမယ့် ခဏခဏတော့ မမှားသင့်ဘူးလေ
5။ ပျက်စီးခြင်းတွေထဲမှာ ဆုံးရှုံးမှု အများဆုံးကတော့ စိတ်ဓါတ်ပျက်စီးခြင်းပဲ သူငယ်ချင်း
6။ အချစ်အတွက်နဲ့ အသက်ပင်သေသေ ဆိုပြီး ဂုဏ်ယူမနေကြပါနဲ့။ အဲဒါ မိုက်ရူးရဲဆန်တာပဲ။
7။ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်မှာ အပြုံးဟာ အခြေခံ အကျဆုံးအရာတစ်ခုပါ။
8။ ဒေါသရဲ့နောက်ကွယ်မှာ အမှားဆိုတာ အမြဲဒွန်တွဲနေလျက်ပါ
(၁) အတွေးအခေါ် အယူအဆ ကောင်းမွန်သူ
(၂) သည်းခံခွင့်လွှတ်တတ်တဲ့ စိတ်ရှိသူ
(၃) ငွေကြး ဥစ္စာကို စီမံခံန့်ခွဲတတ်သူ
(၄) အိမ်ထောင်ရေးကို ထိမ်းသိမ်းနိုင်သူ
(၅) အသောက်အစား ကင်းသူ
(၆) အပျော်အပါး ကင်းသူ
(၇) စိတ်ကူးကောင်း အတွေးကောင်းတွေ ရှိသူ
(၈) တစ်ပါးသူအပေါ် မှီခိုတတ်တဲ့ စိတ်ကင်းသူ
တစ်ခါတစ်ရံ အမျိုးသမီးတွေဟာ စိတ်အား ငယ်တတ်ပေမယ့် အခက်အခဲ အတား အဆီးတွေနဲ့ ကြုံတွေ့လာတဲ့ အခါမှာတော့ ရဲဝံ့စွာ ရင်ဆိုင်နိုင် တတ်ကြပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာ အလွယ်တကူ စိတ်ကောက်တတ်ကြ ပေမယ့်လည်း နားလည် ခွင့်လွှတ်နိုင်ပြီး သနားကြင်နာ တတ်တဲ့ သူမျိုးတွေပါပဲ။ ချစ်ခင်တတ်တဲ့ စိတ်ရှိ သော်လည်း နာကျဉ်းတဲ့ အခါ တစ်ဘဝ လုံးစာ မေ့ပစ် တတ်ကြပါတယ်။
သင့်စိတ်ကို တစ်စုံတစ်ယောက်က နာကျင်အောင် ထိခိုက်အောင် ဒေါသထွက်အောင်ပြုလုပ်လို့ သင့်စိတ်နောက်ကျိနေပြီဆိုရင်တော့ ..
Let it be .. ထားလိုက်ပါ ဘာမှမလုပ်ဲ ဒီအတိုင်းပဲထားလိုက်ပါ … အချိန်ပေးလိုက်ပါ
အချိန်ကာလတစ်ခု ကျော်လွန်ပြီးတဲ့အခါ အရာရာဟာ ပြန်လည်ကြည်လင် သွားပါလိမ့်မယ်
မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ စစ်မှန်တဲ့ အောင်မြင်မှု ဆိုတာ ဘွဲ့လက်မှတ်တွေ ငွေကြေးချမ်းသာမှုတွေ လှပကြော်ကြားမှုတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ အေးချမ်းတဲ့ မိသားစုဘဝနဲ့ သာယာပျော်ရွှင်စရာ ကောင်းတဲ့ အိမ်ထောင်ရေး ကို ရည်ရှည်တည်တံ့ ခိုင်မြဲ အောင် ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက် နိုင်ခြင်း။ ဒါမှမဟုတ် အများက လေးစားတဲ့ တည်ငြိမ် ရင့်ကျက်တဲ့ အပျိုကြီးဘ၀ကို တည်ထောင်နိုင်ခြင်း။ ဒါဟာ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝမှာ အကြီးမားဆုံး စိန်ခေါ်မှု၊ နည်းပေါင်းစုံ ပညာပေါင်းစုံ သုံးပြီး တိုက်ပွဲဝင်ရမယ့် အလှပဆုံး အလျို့ဝှက်ဆုံး ၊ ကြောက်စရာ အကောင်းဆုံး တိုက်ပွဲ တခုပါပဲ။
#credit Mya Khwar Nyo
တစ်စုံတစ်ယောက်ကို အပြစ်မြင်ကာ စိတ်တို၊ဒေါသထွက်နေပါက ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး အမှားတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခု ပြုမိခဲ့ဖူးကြတာကို သတိရမိပါစေ။
အဆင်မပြေမှုများကြုံတွေ့ကာ စိတ်ဓာတ်ကျနေပါက အနည်းဆုံးတော့ သင်အသက်ရှင်သန်နေသေးတယ်ဆိုတာကို သတိရမိပါစေ။
(၁) ကျန်းမာရေး ကောင်းအောင် ရေများများ သောက်ပါ။
(၂) မနက်စာကို ရှင်ဘုရင်လို စားပါ။ နေ့လယ်စာကို သူဌေးလို စားပြီး ညနေစာကို သူတောင်းစားလို စားပါ။
(၃) သဘဝအစား အစာများကို များများ စားပါ။ ထုတ်လုပ်စာများကို လျော့စားပါ။
(၄) အလုပ်တစ်ခု လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် တွေးတော ဆင်ခြင်ပါ။
(၇) တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ပြီး စိတ်ကို လန်းဆန်းစေမည့် နေရာမှာ တစ်နေ့ကို ၁၀ မီနစ်ခန့်လောက် နေပေးပါ။
(၈) တစ်နေ့ကို ၇ နာရီလောက် အိပ်ပေးပါ။
(၉) တစ်နေ့မှာ မီနစ် ၃၀ ခန့်လောက် လမ်းလျှောက်ပေးပါ။ လမ်းလျှောက်နေစဉ်မှာ ပြုံးပါ။
(၁၀) စိတ်တွေ အရမ်းမွမ်းကျယ်နေပြီး အလုပ်အတွက် ဘာမှ မကြံစည်နိုင်ဘူးဆိုလျှင် စိတ်ကို လန်းဆန်းစေမည့် ခရီးတစ်ခု ထွက်လိုက်တာဟာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။
(၁၁) အလုပ်ကို ပုံမှန်လုပ်ပါ။ ဒီနေ့နည်းနည်းလုပ်ပြီး နောက်နေ့ အများကြီး လုပ်တာမျိးကို ဖြစ်နိုင်ရင် ရှောင်ပါ။
(၁၂) အချိန်တိုင်းကို တန်ဖိုးရှိစွာ အသုံးချပါ။
(၁၃) တစ်ပါးသူ အောင်မြင်တာကို မြင်လျှင် မနာလို မဖြစ်ပါနဲ့။ မိမိကိုယ်တိုင် ကြိုးစားပါ။
(၁၄) သူငယ်ချင်းတွေ အပေါ်မှာ အနစ်နာခံပါ။ ထိုသို့ အနစ်နာခံခြင်းကြောင့် သင့်မှာ ပျော်ရွှင်မှုတွေကို ပိုမိုရရှိစေနိုင်ပါတယ်။
(၁၅) ဘဝဟာ အလွန်တိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် အမုန်းပွါးမှုတွေကို လျော့ပြီး လူတိုင်းနှင့် တည့်အောင် ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံပါ။
(၁၆) အရင်တုန်းက သူငယ်ချင်းတွေက ပေးခဲ့သော လက်ဆောင်တွေကို သိမ်းထားပါ။ ထိုလက်ဆောင်တွေက နောင်တစ်ချိန် သင့်ကို ပျော်ရွှင်ပါလိမ့်မယ်။
(၁၇) တစ်နေတာအတွက် များများပြုံးပါ။ များများ ရယ်ပါ။
(၁၈) အငြင်းအခုန် ဖြစ်လျှင် အလျော့ပေးပါ။ အလျော့ပေးခြင်းဟာ သင့်စိတ်ကို သက်သာစေပါတယ်။
(၁၉) အဝေးတစ်နေရာကို ရောက်နေလျှင် မိသားစုထံသို့ ဖုန်းခဏခဏခေါ်ပါ။
(၂၀) အတွေးအခေါ် ကောင်းတဲ့သူ ကောင်းသော အကြံဥာဏ်ပေးနိုင်သူ ထံမှ အကြံဥာဏ်ယူပါ
(၂၁)။ဖြစ်ပြီးတဲ့အတိတ်အတွက် သင်္ခန်းစာယူ၍ စိတ်တည်ငြိမ်သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားလိုက်ပါ။
(၂၆)။ သင်၏ပျော်ရွှင်မှုကို သင်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးပါ၊ သင်ကိုယ်တိုင်ပျော်ရွှင်အောင်နေသွားလိုက်ပါ။
လူတွေ မင်းကို “နေကောင်းလား” ဆိုပြီး နှုတ်ဆက်မေးခွန်းလေး မေးလိုက်တာဟာ မင်းဆီက “မကောင်းဘူး” ဆိုတဲ့ စကားသံကို ကြားချင်လို့ မဟုတ်ဘူး…
ဒါကြောင့် အသာအယာခေါင်းငြိမ့် ပြုံးပြပြီး သူတို့ကြားချင်တာလေးကို ဖြေပေးလိုက်…
လူတွေပြောတဲ့ “အကူအညီ လိုရင်ပြောပါ” ဆိုတာ မင်းဟိုနားဒီနားသွားရင် အဖော်လိုက်ပေးဖို့… မင်းလိုချင်တဲ့ ဖုန်းapp လေးတွေ မျှဝေပေးဖို့ စတဲ့ကိစ္စအသေးလေးတွေကို ပြောတာ…
မင်းကြုံတွေ့နေရတဲ့ ပြသနာတွေ မင်းရင်ဆိုင်နေရတဲ့ မိသားစု အခက်အခဲတွေကို သွားပြောပြီး အကူညီတောင်းလို့ သူတို့မင်းကို မကူညီနိုင်ဘူး…
တကယ်တော့ မင်းဘဝအတွက် အရေးကြီးတဲ့ပြသနာတွေ အခက်အခဲတွေကို ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကမှ ဝင်ရောက်ပြီး မကူညီ မကယ်တင်နိုင်ကြဘူး…
မင်းကို ကယ်တင်နိုင်တဲ့ တစ်ဦးတည်းသော လူဟာ မင်းကိုယ်တိုင်ပဲ…
အပျိကြီးဆိုတာ ဂျီးများလို့ ယောက်ျားမရတာ မဟုတ်ဘဲ ယောက်ျားရဖို့ ဂျီးများတာသာဖြစ်တယ်
ချိန်တာနဲ့လွဲသွားတာ မဟုတ်ဘဲ အလွဲတွေကိုချိန်မိမှာစိုးလို့ မယူတာဖြစ်တယ်
သူများတွေလင်ပူမိပြီး ဗျာပါရိုက်နေချိန် အပျိုကြီးများဟမ်ဘာကာကိုက်ရင်း စားဝင်အိပ်ပျော်အလှမပျက် နေမြဲတိုင်းလေးနေနေရတယ်
ဘုရားဟောနဲ့အညီ မိမိကိုယ်သာကိုးကွယ်ရာလို သတ်မှတ်ပြီး ဘယ်သူ့မှအားမကိုးဘဲ တယောက်ထဲ တင့်တင့်တယ်တယ်နေတယ်
ဈေးကွဲချိန် ရောင်းမစွံဘဲကျန်နေတာမဟုတ်ဘဲ တန်ဖိုးကြီးလို့ သူများမဝယ်နိုင်ကြလို့ ကျန်နေတာသာဖြစ်တယ်
အိမ်ထောင်သည်မိန်းမတွေ ရင်ထုနေရတဲ့အချိန် အပျိုကြီးမမများ ဘင်ထုပြီးစစ်သီချင်းပါ ဆိုနေကြတယ်
အိမ်ထောင်သည်မိန်းမတွေပိုက်ဆံကို ယောကျာင်္းမျက်နှာကြည့်သုံးနေရချိန်မှာ အပျိကြီးများဘယ်သူ့မှ လူမထင်ဘဲစိတ်ကြိုက် သုံးခွင့်ရကြတယ်
ဝိတ်ထိန်းရင် ကိုယ်လုံး လှပါသတဲ့
စိတ်ထိန်းရင် တဘဝလုံး လှပါသတဲ့
ကိုယ့်ကျင့်တရားကို ထိန်းရင် တော့
မိဘနဲ့ သားသမီးကြား နားလည်မှုလွဲတာ
သင်က မိဘဆိုရင် မိဘကြောင့်လို့ ခံယူပြီး ကြိုးစား ပြု ပြင်ပါ ။
သင်က သားသမီး ဆိုရင် သားသမီးကြောင့်လို့ ခံယူပြီး ကြိုးစား ပြု ပြင်ပါ။
ကျနော်တို့တွေ လောကကြီးထဲ ဖြတ်သန်းကျင်လည်တဲ့အခါ ဘဝကို ဓာတ်လှေကားတခုလို သဘောထားသင့်တယ်…
ကိုယ်သွားချင်တဲ့ ပန်းတိုင်ကိုရောက်ဖို့ အမြင့်ကို တက်တဲ့အချိန် ကိုယ်နဲ့အတူတူ ဘဝခရီးမဆက်လိုတဲ့ လူတချို့ကို လမ်းတဝက်မှာ ရပ်ပြီး ဆင်းခွင့်ပေးရမယ်….
ဒါပေမယ့် ခက်တာက ကျနော့်ဓာတ်လှေကားက ရှေ့ဆက်မသွားဘဲ အဲဒီလူတွေ ဆင်းခဲ့တဲ့နေရာမှာပဲ ရပ်နေတယ်…
စိတ်ပြောင်းပြီးများ ပြန်လှည့်လာမလားဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့…
ဒီစိတ်နဲ့ပဲ ကျနော်ဟာ အရာရာကို မအောင်မြင်နိုင်ခဲ့တာ…
ရှုံးတဲ့အချိန်ရှိသလို နိုင်တဲ့အချိန်လည်းရှိတယ်။ မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ ရှင်သန်မယ်။ ဒါမှ ဘဝပီသတယ်။ လူတစ်ချို့က အမှန်တကယ် ဖြစ်ပျက်တာကို လက်မခံနိုင်တတ်ကြဘူး။ အဲတာကြောင့်ပဲ ရှုံးပြီးရင်း ရှုံးခဲ့ကြရတယ်။
Positive thinking က လူအများကို အပြစ်တင်စရာမလိုဘူး။
Positive thinking က စိုးရိမ်ကြောင့်ကျမှုတွေ မခံစားစေဘူး။
Positive thinking က ပျော်ရွှင်ခြင်းကို အနားကမခွါစေဘူး။
Positive thinking က ပူဆွေးသောကကို လမ်းကြောင်းလွဲပေးတယ်။
Positive thinking က ညှိုးနွမ်းတဲ့စိတ်ကို လန်းဆန်းမှုတွေပေးတယ်။
Positive thinking က ပြုံးရွှင်ဖော်ရွေတဲ့ အကျင့်စရိုက်ကိုပေးတယ်။
Positive thinking က အသစ်တစ်ဖန် ထရပ်ဖို့ အင်အားတွေပေးတယ်။
Positive thinking က အဆုံးမရှိတဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေပေးတယ်။
ခဏခဏ ဒေါသထွက်နေရေတယ်ဆိုတာ သ ဘောထားမကြီးသေးတာလည်း
နေပျော်တဲ့ ဘဝ ဖြစ်လို့လာနိုင်ပါလိမ့်မယ်…
သင့်ရဲ့ရင့်ကျက်နေသော စိတ်ဓါတ်ကို ပြသကြည့်ပါ !
ဒါဟာ သင့်ရဲ့အောင်မြင်မှု့တရပ်ဆိုတာ သင်သိလာပါလိမ့်မယ်
မအောင်မြင်ရတဲ့ အဓိက အချက်များ
(၁) သူတစ်ပါး အပေါ်မှာ သံသယဖြစ်နေခြင်း
(၂) မကောင်းတဲ့ ဘက်ကိုပဲ စဉ်းစားနေခြင်း
(၃) မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်း အပေါ်မှာ မလေးမစား ဆက်ဆံပြုမူခြင်း
(၄) မအောင်မြင်မှာကို ကြောက်ရွံ့နေခြင်း
(၅) တစ်ပါးသူရဲ့ မကောင်းကြောင်းကို လိုက်ပြောနေခြင်း
(၆) တစ်ခြားသူတွေ အပေါ်မှာရော မိမိကိုယ်ကိုယ်ရော အပစ်တွေကို ရှာနေခြင်း
(၇) စိတ်တို ဒေါသထွက်ခြင်း
(၉) မကောင်းတဲ့ စကားလုံးတွေကိုပဲ ပြောနေခြင်း
(၁၀) တစ်ပါးသူ အပေါ်မှာ မေတ္တာမထားနိုင်ခြင်း
မိမိကိုယ်တိုင်က စကားပြောတဲ့ စည်းကမ်းလေးတွေ ချမှတ်ထားပြီးတော့ ဒီအတိုင်းသတိထားပြီး လိုက်နာကျင့်သုံး
လိုက်မယ်ဆိုရင် မိမိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ ပြဿနာ တက်စရာအကြောင်း မရှိတော့ဘူး။
(၁) ပြောသင့်တဲ့အချိန်မှာ ပြောမယ်။မပြောသင့်တဲ့အချိန်မှာ မပြောဘူး။
(၂) မှန်တာကိုပဲ ပြောမယ်။ မမှန်တာကိုမပြောဘူး။
(၃) ပြောမယ်ဆိုရင်လည်း ကြင်ကြင်နာနာယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးနဲ့ သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့ပြောမယ်။
(၄) ပြောတဲ့အခါမှာ အကျိုးရှိတဲ့စကားကိုသာပြောမယ်။ အကျိုးမရှိတာကို မပြောဘူး။
(၅) ပြောတဲ့အခါမှာ မေတ္တာနဲ့ပြောမယ်။ဒေါသနဲ့မပြောဘူး။
မုန့်လုစားသလို Feeling တော့ဟုတ်ဘူး
ယုံကြည်မှုဆိုတာကတော့ မသိစိတ်ရော သိစိတ်ရောကိုပါ ဖမ်းစားနိုင်စွမ်းရှိတဲ့
ယုံကြည်မှုတွေရှိနေသ၍ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အားကိုးနေကြအုံးမှာပါ
အဲ့အတွက် နှစ်ဦးနှစ်ဘက်စလုံး ယုံကြည်မှုထားဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်
လောကကြီးမှာ အကောင်းမြင်ဝါဒ တစ်ခုတည်းနဲ့ အလုပ်မဖြစ်ဘူး။ အမှန်ကို မြင်ရဲမှ ရမယ်။ အမှန်တရားဆိုတာ နည်းနည်းတော့ ရက်စက်တာပေါ့လေ။
#ဂျူး – ဆုံနေရက်နဲ့လွမ်းလေခြင်း
Business အသုံးအနှုန်းအရ ပြောမယ်ဆိုရင် Living Together ဆိုတာ Long Term Business Initial Investment တစ်ခုဖြစ်တယ်။
နှစ်ယောက်အတူတူ သာယာပျော်ရွှင် ကြည်နူးဖို့ အတွက် . .Net Profit ကိုချည်း မျှော်လင့်ထားလို့ မရဘူး ။
ဆုံးရှုံးနိုင်မယ့် .. ပြန်မရနိုင်မယ့် … Costs & Expenses , Loss တွေကိုလည်း ကြိုတင်တွက်ဆပြီး ပြင်ဆင်ထားဖို့ လိုအပ်တယ်။
ကွဲသွားတော့မှ .. မယူဖြစ်ကြတော့မှ …တစ်ဖက်ယောကျာ်းလေးကို နှမချင်း မစာနာဘူး ၊ သစ္စာမရှိဘူး ၊ လက်ထပ်မယ် ယူမယ်ထင်လို့ ဘဝတစ်ခုလုံး ပုံပေးခဲ့ရတာ အခုတော့ ယောကျာ်းမပီသဘူး ဆိုပြီး ယောကျာ်းလေးတွေအပေါ် အပြစ်မတင်ပါနဲ့ …
Living Together မှာ .. အတူတူအိပ်ပြီးရင် လက်ထပ်ပါ့မယ်လို့ Commitment မရှိဘူး။
ဒါကြောင့် … မိန်းကလေးများ ယောကျာ်းလေးတွေကို … Living Together နေပြီးရင်တော့ ငါ့တို့ကို ယူမှာပဲ .. လက်ထပ်မှာပဲလို့တော့ တရားသေ မတွက်ထားသင့်ဘူး။ မယူဖြစ်ကြတဲ့ အတွဲတွေ ၇၀% ရှိတယ်။
အစကတည်းက .. သူယူချင်ယူ မယူချင်နေ … ငါလည်း ယူချင်မှယူမယ် .. မယူချင်မယူဘူး ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုး မရှိရင် … ဘယ်တော့မှ ယောကျာ်းတစ်ယောက်နဲ့ Living Together မနေပါနဲ့ ။
ယောကျာ်းတစ်ယောက်ကို ခန္ဓာကိုယ်ပုံပေးပြီး အပိုင်ချည်နှောင်ဖို့ မကြိုးစားပါနဲ့ ..
ဘယ်တော့မှ မရဘူး …
သူတို့အမြဲပြောနေကြ စကားတစ်ချို့ ..
– အပျိုကြီး လူပျိုကြီး လုပ်မနေနဲ့ .. အချိန်အခါရှိတုန်း အိမ်ထောင်ပြုတော့
– အိမ်ထောင်ပြုပြီးရင်လည်း .. ကလေးမြန်မြန်ယူတော့လေ .. အသက်တွေကြီးလာပြီ
– ကလေးတစ်ယောက်လောက် ယူပြီးရင် .. အဖော်လေးရှိအောင် နောက်တစ်ယောက်ထပ်ယူ
– ယောကျာ်းကို လွှတ်မထားနဲ့ လိုက်ကြည့်နော် .
– ကိုယ်က အိမ်ထောင်သည် ကလေးအမေဖြစ်နေပြီ … သည်းခံရမယ်
– တစ်လင်မကောင်း တစ်လင်ပြောင်းနဲ့ နာမည်ပျက်တယ်
– အပျိုကြီး လူပျိုကြီး လုပ်နေတော့ရော သူတို့ ထမင်းတင်ကျွေးထားရလို့လား
– အိမ်ထောင်ကျပြီးတော့ ကလေးယူရင်ရော .. သူတို့က ဝိုင်းထိန်းပေးမှာလား
-ကလေးတစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက်ယူခိုင်းတာ.. သူတို့က ငွေကြေးအထောက်အပံ့ပေးမှာလား
– မျက်စိဒေါက်ထောက်ကြည့်နေလည်း ဖောက်ပြန်ချင်တဲ့ ယောကျာ်း .. လစ်တာနဲ့ လုပ်တာပဲ
– ကလေးအမေဖြစ်တာနဲ့ .. သည်းခံရမယ်ဆိုတော့ .. ယောကျာ်းတွေ ပိုကန်းတက်ကုန်တာပေါ့
– တစ်လင်မကောင်းဘဲ မပြောင်းခိုင်းတော့ … ယောကျာ်း ဖောက်ပြန်နှိပ်စက် ရိုက်နှက်နေရင် ဝင်ကူပြီး အရိုက်အနှက်ခံပေးကြမှာလား
ကာယကံရှင်ထက် ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေက ပိုသိ ပိုတတ် ပိုနားလည် ပိုစိုးရိမ်နေကြတာလား
ငြင်းခုန်တယ်ဆိုတာ အနိုင်ရလိုစိတ် ဒေါသစိတ်တွေနဲ့ ပြောဆိုတာပါ။
ရှင်းပြတယ်ဆိုတာ စေတနာ မေတ္တာစိတ်နဲ့ ပြောဆိုတာပါ
“ကြိုက်တာ” နဲ့ “ချစ်တာ”
ဒီနှစ်ခုကြားက ခြားနားချက်ကို သိလား…?
လူတစ်ယောက်ဟာ ပန်းတစ်ပွင့်ကို ကြိုက်ရင် ….
ဒါပေမယ့် သူဟာ ပန်းတပွင့်ကို ချစ်ရင်တော့ ….
ကျနော်က သူမအတွက် ရေလောင်းပေါင်းသင်ပေးမယ့် လူမျိုးပဲဖြစ်ချင်တယ်……
လှတယ်ဆိုတဲ့မိန်းကလေးတွေပေါပါတယ်….ချစ်စရာလေး ဆိုတဲ့မိန်းကလေး သာရှားနေတာ…
အရေးကြီးတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တခု ချတော့မယ်ဆိုရင် ဖြစ်နိုင်ခြေတွေ အကုန် စဉ်းစားရပါတယ်
ကိုယ်မှန်းထားတဲ့အတိုင်း မဖြစ်ရင် ဘာလုပ်မလဲလို့ ကြိုစဉ်းစားထားသင့်ပါတယ်
အကောင်းတွေကိုချည်းပဲ မျှော်လင့် လုပ်လိုက်ပြီး ထင်သလို ဖြစ်မလာတော့ ဒုက္ခရောက်နေသူတွေ တွေ့နေရလို့ပါ…
ငယ်ငယ်တုန်းကဆို ပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတာ အရာဝတ္ထု
တခုပါပဲ လိုချင်တာကို ရရင်ပျော်ရွှင်တယ်
ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တခုပါပဲ အဲ့ဒီရည်မှန်းချက်ပြည့်တဲ့အခါ ပျော်ရွှင်တယ်။
စိတ်နေစိတ်ထားတမျိုးပါပဲ အသိတရားရ နားလည်သဘောပေါက်လာတော့ ပျော်ရွှင်တယ်။
ပျော်ရွှင်ခြင်းကို ရာထူးဥစ္စာ ဂုဏ်ပကာသနနဲ့ လဲလှယ်
ပျော်ရွှင်ခြင်းကို ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဆန်းစစ် ခြင်းကနေပဲရနိုင်တာပါ။
မိသာစုသာယာ ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာနေတာကလဲ ပျော်
တကယ်တော့ ပျော်ရွှင်ခြင်းက အဝေးဆုံးမှာ မရှိပါဘူး